Sigaar cabayaashu waxay leeyihiin khatar sare oo ah inay ku dhacaan COVID-19
Sigaar-cabe ahaan, khatarteyda inaan ku helo fayraska COVID-19 ma ka sarreeysaa tan kuwa aan sigaar-cabbin?
Waqtiga la diyaarinayo su'aalahan iyo jawaabahan, ma jiraan daraasado dib loo eegay oo qiimeeyay halista infekshanka SARS-CoV-2 ee la xiriira sigaar cabista. Si kastaba ha noqotee, dadka caba tubaakada (sigaarka, dhuumaha biyaha, bidis, sigaar, waxyaabaha tubaakada kulul) waxay u nugul yihiin qaadashada COVID-19, maadaama ficilka sigaarcabku uu kujiro taabashada faraha (iyo sigaarka wasakhaysan) bushimaha, taas oo kordhinaysa suurtagalnimada gudbinta fayraska gacanta ilaa afka. Cabbitaanka dhuumaha biyaha lagu cabbo, oo sidoo kale loo yaqaan shiishada ama shiishadda, ayaa inta badan ku lug leh wadaagista qaybaha afka iyo tuubbooyinka, taas oo fududeyn karta gudbinta fayraska COVID-19 ee goobaha bulshada iyo bulshada.
Sigaar cabe ahaan, ma waxaa laga yaabaa inaan yeesho calaamado aad u daran haddii aan cudurka qaado?
Sigaar cabidda nooc kasta oo tubaako ah waxay yareysaa awoodda sanbabada waxayna kordhisaa halista infekshano badan oo neef mareenka ah waxayna kordhin kartaa darnaanta cudurada neef mareenka. COVID-19 waa cudur faafa oo ugu horreyn weerara sambabaha. Sigaar cabiddu waxay waxyeeleysaa shaqada sanbabada taasoo ku adkeyneysa jirka inuu la dagaallamo coronaviruses iyo cudurrada kale ee neef mareenka ku dhaca. Cilmi-baaris la heli karo ayaa soo jeedinaysa in sigaar-cabayaashu ay khatar sare ugu jiraan inay yeeshaan natiijooyin daran iyo dhimasho COVID-19
Qashin-saarid ahaan, ma waxay u badan tahay inaan qaadsiiyo ama aan yeesho calaamado aad u daran haddii aan cudurka qaado?
Ma jiraan wax caddeyn ah oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya isticmaalka sigaarka elektaroonigga ah iyo COVID-19. Si kastaba ha noqotee, caddeynta jirta waxay muujineysaa in nidaamka gudbinta nikotiinka elektaroonigga ah (ENDS) iyo nidaamyada elektaroonigga ah ee bixinta nikotiin (ENNDS), oo inta badan loo yaqaanno sigaarka elektaroonigga ah, ay yihiin kuwo waxyeello leh oo kordhiya halista cudurrada wadnaha iyo cudurrada sanbabada. Maaddaama fayraska COVID-19 uu saameynayo mareenka neef-mareenka, ficil-gacmeedka afka ee isticmaalka sigaarka elektaroonigga ah wuxuu kordhin karaa halista cudurka.
Ka waran isticmaalka tubaakada aan qiiqa lahayn, sida tubaakada la ruugo?
Isticmaalka tubaakada aan qiiqa lahayn badanaa waxay ku lug leedahay taabashada gacanta ilaa afka. Khatarta kale ee la xiriirta adeegsiga waxyaabaha tubaakada aan qiiqa lahayn, sida tubaakada canka la dhigo, ayaa ah in fayrasku faafi karo marka adeegsaduhu soo tufo candhuufta xad dhaafka ah ee la soo saaray intii lagu jiray hawsha calaalinta.
Maxay WHO kula talinaysaa dadka isticmaala tubaakada?
Marka la eego halista caafimaadka ee isticmaalka tubaakada, WHO waxay ku talineysaa joojinta isticmaalka tubaakada. Joojinta ayaa ka caawin doonta sanbabadaada iyo wadnaha inay si fiican u shaqeeyaan laga bilaabo isla marka aad joogsato. 20 daqiiqo gudahood markaad joojiso, garaaca wadnaha oo sareeya iyo hoos u dhaca cadaadiska dhiigga. 12 saacadood ka dib, heerka kaarboon monoksaydhka ku jira qulqulka dhiigga ayaa caadi u dhacaya. 2-12 toddobaad gudahood, wareegga wareegu wuu fiicnaadaa shaqada sanbabaduna way sii korortaa. 1-9 bilood kadib, qufaca iyo neefta oo gaaban ayaa yaraata. Joojinta ayaa kaa caawin doonta inaad ka ilaaliso kuwa aad jeceshahay, gaar ahaan carruurta, u nuglaanta qiiqa sigaarka.
WHO waxay ku talineysaa in la isticmaalo waxqabadyo la xaqiijiyey sida khadadka sigaar joojinta bilaashka ah, barnaamijyada joojinta farriinta qoraalka ee moobiilka, iyo daaweynta beddelka nikotiinta (NRTs), iyo kuwa kale, ee loogu talagalay joojinta isticmaalka tubaakada.
Maxaan sameyn karaa si aan uga ilaaliyo dadka halista la xiriirta sigaar cabista, isticmaalka tubaakada aan qiiqa lahayn iyo uumiga?
Haddii aad sigaar cabto, isticmaasho e sigaarka ama aad isticmaasho tubaakada aan qiiqa lahayn, hadda waa xilli fiican oo aad sigaarka u joojin lahayd.
Ha la wadaagin qalabka sida dhuumaha biyaha iyo sigaarka elektaroonigga ah.
Sii faafi khataraha sigaarka, isticmaalka sigaarka elektaroonigga ah iyo isticmaalka tubaakada aan qiiqa lahayn.
Ka ilaali dadka kale waxyeelada qiiqa sigaarka lagu cabo.
Ogow muhiimadda ay leedahay in la maydho gacmahaaga, kala fogaanshaha jirka, iyo in aanad la wadaagin wax sigaar ah ama waxyaabaha elektaroonigga ah.
Ha ku tufin meelaha caamka ah
Isticmaalka nikotiintu miyuu saameyn ku yeeshaa fursadayda marka la eego COVID-19?
Ma jiraan macluumaad aan ku filnayn hadda oo lagu xaqiijinayo xiriir kasta oo ka dhexeeya tubaakada ama nikotiinka ka hortagga ama daaweynta COVID-19. WHO waxay ku boorinaysaa cilmi-baarayaasha, saynisyahannada iyo warbaahinta inay ka taxaddaraan kordhinta sheegashooyinka aan caddaynta ahayn ee ah in tubaakada ama nikotiintu ay yareyn karto halista COVID-19. WHO waxay si joogto ah u qiimeyneysaa cilmi baaris cusub, oo ay kujirto tan oo baareysa xiriirka ka dhexeeya isticmaalka tubaakada, isticmaalka nikotiinka, iyo COVID-19.
Ma jiraan wax faallooyin ah weli. Noqo kan ugu horreeya ee faallo ku qora maqaalkan!